About Kdenlive uye OpenShot. Huru hunhu hwayo | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | GNU/Linux, Multimedia, Zvirongwa, Free Software, Linux software
Mwedzi mishoma yapfuura, muverengi akatsamwiswa nekutaura kwangu kuti Kdenlive yaive nesimba kudarika OpenShot uye akandipomera kuti ndiyedze. Chokwadi ndechekuti Ini ndanga ndichingodzokorora chimwe chinhu chinoita kunge chibvumirano pakati pevamwe kana vashoma nyanzvi vhidhiyo vhidhiyo avo zviitiko neakavhurika sosi yandaiwanzo verengar. Kunyanya, OpenShot yaive yakaringana uye yakaringana kwandiri pane dzimwe nguva nguva dzandaifanira kugadzirisa vhidhiyo uye ikozvino ndoshandisa masevhisi epamhepo. Asi, nguva yasvika yekuti ndipindure mubvunzo.
Saizvozvo, usapinde mutsika yekutikumbira kuti titsigire zvirevo zvedu. Ivai vaverengi vakanaka, gamuchirai zvese zvatinotaura uye tinyai kushambadziro
Kunyanya, ini ndinokurudzira iwe utarise kutaura zvakaitwa naShupacabras munyaya yekutanga yezvikamu izvi.
1 About Kdenlive uye OpenShot
1.1.1 Zvinhu zvinozivikanwa
1.2.1 Zvinhu zvinozivikanwa
About Kdenlive uye OpenShot
Kdenlive chirevo muChirungu che KDE Nonlinear Vhidhiyo Edhita, mune chinyorwa chakapfuura takatsanangura kuti ndeapi maitiro eiyi mhando yemupepeti. Yakavakwa neLinux kugoverwa mupfungwa kuti inoshanda neiyo KDE desktop, zvakare ine shanduro dzeWindows, MacOS, uye BSD neMacOS.
Chirongwa chinogona kushandiswa kuburitsa mhando dzese dzevhidhiyo mukuwedzera pakuidzikisira, kuwedzera mhedzisiro uye shanduko, uye kugadzira mameneti akasarudzika. Iwe unogona kushanda nechero chero odhiyo uye vhidhiyo fomati pasina kukosha kwekuishandura sezvo ichienderana neFfmepg raibhurari
Injini yeKdenlive ndiyo MLT fomati kubva ipapo tinotaura muchinyorwa chakapfuura. Yakagadzirwa uye uye yeiyo terevhizheni indasitiri, iyo inobvumidza basa ine akawanda odhiyo uye vhidhiyo maraibhurari
Izvo zvakare zvinotora mukana kune mamwe akavhurwa sosi mapurojekiti senge
LASDSPA: Tsananguro yekugadzirwa kweodhiyo kugadzirisa uye mhedzisiro plug-ins yakaburitswa pasi peiyo LGPL rezinesi
Fry: Icho chimiro chekugadzira vhidhiyo mhedzisiro. Inopa mafirita, masanganisi, uye majenareta zvinoenderana neiyo minimalist API yekugadzira plugins.
SoX: Iri rairo rekushandisa rinobvumidza iwe kushandura maodhiyo faira kune mamwe mafomati uye nekuwedzera mhedzisiro kwavari.
Iyi software inotsigira isina muganho mavhidhiyo uye nziyo uye inosanganisira maturusi
kugadzira, kucheka, kufambisa, kudzima vhidhiyo, odhiyo, zvinyorwa uye mifananidzo yemifananidzo.
Imwe neimwe odhiyo uye yevhidhiyo track inogona kutenderedzwa kana kuvharirwa zvichienderana nezvinodiwa.
Inogadziriswa mushandisi interface uye mapfupi ekhibhodi.
Kugadzirwa kwemakopi epasi ekugadzirisa kuchengetedza system zviwanikwa panguva yekukwirisa. Iko kutumira kunze kunoitwa mune yekutanga fomati.
Kurodha pamhepo pamhepo ekupa ma profiles, shanduko, mhedzisiro uye matemplate.
Iyo OpenShot isiri-mutsara vhidhiyo mupepeti ine shanduro dzeWindows, Linux, uye Mac.
Iyo ine mifananidzo uye keyframe kugona iyo inobvumidza vashandisi kuita zvinhu senge kupera, kutsvedza, kubhowa, uye kumutsa chero chinhu cheiyo vhidhiyo chirongwa.. Netatu uye kujoina maturusi unogona kukurumidza kushandura kureba kwevhidhiyo. Uchishandisa vhidhiyo mhedzisiro injini iwe unogona kuita zvinhu sekubvisa iyo yekumashure, shandura iwo mavara, gadzirisa kupenya uye zvimwe zvakawanda.
Openshot inoshanda neanotevera open source mapurojekiti
Blender: Platform yekugadzira 3D mifananidzo.
Inkscape: Software yekugadzira vector mifananidzo.
libopenshot: Raibhurari yekugadzirisa multimedia.
Kugadzirwa kwe3D animated mazita anoenderana neBlender.
Kutamba mavhidhiyo munzira dzakasiyana uye nekumhanya.
Girafu mafungu ekuteerera uye kusanganisa iyo mifananidzo muvhidhiyo.
Dhawunirodha furemu yazvino semufananidzo nekudzvanya bhatani.
Akafanotaurwa matemplate ekugadzira 2D mazita
Kufananidza pakati pezvirongwa zviviri izvi kwakaitwa uchishandisa Ubuntu Studio 20.10 (kugoverwa kweLinux yakagadzirirwa kugadzirwa kwemultimedia) Ubuntu Studio inosanganisira Kdenlive vhezheni 6.22.1 mukuisirwa kwayo. Iyo vhezheni 2.5.1 yeOpenShot ndakaitora kubva kumatura ekuparadzira. Vamwe venyu vanogona kunzwa kuti kuyedzwa hakuitwe nhanho yakaenzana. Ramba uchifunga kuti chinangwa changu hachisi chekuenzanisa mashandiro asi huwandu hwezvishandiso uye nyore kushandisa.
Munyaya inotevera tichapinda munyaya yacho. Ndinopika pandebvu dzaStallman.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » About Kdenlive uye OpenShot. Huru maficha